Asa soratra: namoaka ny “Rango-tsento” i Fenotsiky | NewsMada
Asa soratra: namoaka ny “Rango-tsento” i Fenotsiky
Rafaramalala Saholinirina ny tena anarany, saingy nosafidiny manokana ho sonian’ireo asa sorany ny hoe Fenotsiky. Mpampianatra sady mpanoratra avy any amin’ny faritra Alaotra Mangoro any i Fenotsiky, mpikambana ao amin’ny Havatsa Upem, araka ny nambarany. Na efa renim-pianakaviana aza izy, mbola ao anatin’ny fahatanorana tanteraka.
Na eo aza izany fisandratany izany, azo lazaina ho dingana lehibe no efa vitany eo amin’ny tontolon’ny asa soratra. Lehibe indrindra amin’izany ny “Rango-tsento”, boky amboaran-tononkalo voalohan’i Fenotsiky. Ahitana sanganasa miisa 111 izy ity ary nivoaka tamim-pomba ofisialy, ny 17 novambra teo, tamin’ny alalan’ny hetsika miavaka, tetsy amin’ny Cemdlac Analakely.
Raha fintinina, soratra anehoana aingam-panahy, mifantoka amin’ny fitiavana amin’ny lafiny rehetra (tanindrazana, olon-droa, tontolo iainana, sns), no atosaky ny mpanoratra, ao anatin’ity angon-tononkalony voalohany ity. Tsy vitsy ny mpanakanto maniry ny hamoaka zavatra toy izao, saingy eo ny sakana samihafa, tsy ahafaha-mikofoka.
Ho an’i Fenotsiky kosa, hery manosika hioitra izany sakana izany ny fahatsapana fa mihamaro ny mankafy ny asa soratra, indrindra ny aty an-dRenivohitra. Hany ka nivoaka soa aman-tsara ny “Rango-tsento”, nosoratana ho lovan’ny taranaka, araka ny nohamafisiny.